အဘယ်မှာရှိ NWA အခုတော့၏အဖွဲ့ဝင်များဖြစ်ပါသလား
ဂီတ Rap ဂီတ & Hip-Hop
by ဟင်နရီ Adaso
NWA မူရင်းအဖွဲ့ဝင်များကရေခဲပြင် Cube (O'Shea ဂျက်ဆင်), Dr. Dre (Andre လူငယ်), Eazy-E ကို (အဲရစ် Wright), DJ သမား Yella (Antoine Carraby), နှင့် MC Ren (Lorenzo Jerald ပက်) ၏ဖွဲ့စည်း 1980 ရက်ပ်အဖွဲ့တစ်ဖွဲ့ဖြစ်ပါတယ် ။
အုပ်စုရဲ့ပထမဆုံးအယ်လ်ဘမ်ရဲတပ်ဖွဲ့ကရက်စက်ကြမ်းကြုတ်, လူမျိုးရေးခွဲခြားမှုများနှင့်မတရားမှုမနာလို။ သငျသညျဖြစ်ကောင်းမြင်ရပါတယ် လမျးဖွောငျ့ Outta Compton , ဆန္ဒပြသူတွေအဖြူရောင်ရဲကလူမည်းဆယ်ကျော်သက်များ၏ဆိုးဝါးပစ်ခတ်မှု၏နှစ်ပတ်လည်နေ့အထိမ်းအမှတ်ဖာဂူဆန်, MO ကို၏လမ်းများယူတဲ့အခါမှာဒါဟာတနင်္ဂနွေပေါ်ရောက်ရှိလာခဲ့ NWA ၏ namesake အတ္ထုပ္ပတိရုပ်ရှင်။
ရဲ့သူတို့ခဲ့ဘယ်မှာအခုသူတို့ဖြစ်ကြသည်င့်နေရာကိုကြည့်ရှုရန်ဟောပြောမှုတွေရက်ပ်အဖွဲ့တစ်ဖွဲ့ NWA အင်္ဂါအတူတက်ဖမ်းကြစို့။ ပြူဂိမ်း။
Dr. Dre (ထိုအခါ)
ထိုအခါ: Dr. Dre 1980 ခုနှစ်ကမ္ဘာ့ဖလားအတန်းအစား Wreckin '' Cru များအတွက် DJ သမားအဖြစ်ထွက်တော့တာပဲ။ သူ Rhymes နှင့်ထုတ်လုပ်မှုလုပ်ငန်းတာဝန်များ juggling, NWA အတွက်မိုက်ကရိုဖုန်းမှအရှိန်မြှင့်။ ဘေးဖယ် NWA ကနေ Dre အခြားမှန်သောအနုပညာရှင်အဘို့ကိုထုတ်လုပ်ခဲ့ပါတယ်။ သူကနောက်ပိုင်းမှာ Eazy-E နှင့် Ice Cube နှင့်အတူ feuded ။ အုပ်စုနှင့်အတူထွက်ကျသွားပြီးနောက် Suge Knight ဟာအတူ Death Row Records ကို, Dre NWA left နှင့် Co-တည်ထောင်ခဲ့သည်။
Dr. Dre (ယခု)
(အဲလ်ဆာ / Getty ခြင်းဖြင့်ဓာတ်ပုံ)
အခုဆိုရင်: Dre သူ့ကိုယ်ပိုင်ဂီတအင်ပါယာ, နောက်ဆက်တွဲအခြေအနေ Entertainment ကဖွဲ့စည်းရန် Death Row ထားခဲ့တယ်။ အဲဒီမှာသူကပိုမကြာသေးမီက, Kendrick Lamar Eminem လက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့နှင့် 50 Cent က၏အလုပ်အကိုင်များကိုဖွင့်လိုက်ပါကကူညီပေးခဲ့, အဆိုပါဂိမ်းနှင့်။ ဂျင်မီ Iovine နှင့်အတူ Dre တို့က Dre ကိုလည်းပူးတွဲတည်ထောင်ခဲ့ပြီး Beats ။ ဝန်ဆောင်မှု streaming ဂီတ, Music, Beats, နောက်သို့လိုက်ကြ၏။ 2015 ခုနှစ်, Dre တစ်ဦးကဖော်ပြခဲ့သည် $3ဘီလီယံအဘို့ Apple ကမှ Beats Electronics ကရောင်းချခဲ့သည်။ Dre ရောင်းများထံမှခန့်မှန်းခြေသန်း 600 banked ။ အဆိုပါသဘောတူညီချက်ကိုချက်ချင်းအသက်ရှင်လျက်အချမ်းသာဆုံးရက်ပ်အဖြစ် Dre positioned ။
ရေခဲပြင် Cube (ထိုအခါ)
ထိုအခါ: ရေခဲပြင် Cube သူ NWA တည်ထောင်သူအဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံတစ်ခုဖြစ်လာဖို့သွားစီအိုင်အေလို့ခေါ်တဲ့အုပ်စုတစ်စုရှိသူ၏စတင်ရရှိခဲ့သည်။ (Cube ကိုအတိုကောက်အဘို့အရာရှိပါတယ်, ဒါကြောင့်ဖြစ်ပုံရသည်) ။ ကြောင်းသံသယရှိသူ Jheri ဆံပင်ကောက်ကောက်နေသော်လည်း Cube ကိုအပူကျဆင်းနေခဲ့သည်။ သူကအခြားအုပ်စုတစ်စုအဖွဲ့ဝင်များအတွက် Rhymes ရေးသားခဲ့သည်။ သူ Eazy-E ကိုရဲ့ "Boyz-N ကို-The-hood ကို" ရေးသားများနှင့် Eazy-Duz-ဒါဟာတစ်အများစုမှလှူဒါန်းခဲ့သည်။
NWA ထွက်ခွာပြီးနောက်, Cube ထူးခြားတဲ့တစ်ကိုယ်တော်ပြေးစတင်လုပ်ဆောင်ခဲ့သည်။ သူ၏ပထမဦးဆုံးနှစ်ဦးကိုတစ်ကိုယ်တော်အယ်လ်ဘမ် 1990 ရဲ့ AmeriKKKa ရဲ့အများစုက Wanted နှင့် 1991 ခုနှစ်ရဲ့သေခြင်းကလက်မှတ်, ရှိသမျှအချိန်အကြီးမြတ်ဆုံး hip-hop အယ်လ်ဘမ်နှစ်ခုထည့်သွင်းစဉ်းစားနေကြသည်။ သူလည်း Mid-90 ခုနှစ် Westside Connection ကိုဖွဲ့စည်းရန် WC နှင့် Mack 10 နှင့်အတူတက်ပူးပေါင်း။ Bow Down (1996) နှင့်အကြမ်းဖက်ခြိမ်းခြောက်မှုများ (2003): အဆိုပါအုပ်စုတွင်နှစ်ဦးကိုအယ်လ်ဘမ်ကိုထုတ်လုပ်ခဲ့ပါတယ်။
ရေခဲပြင် Cube (ယခု)
အခုဆိုရင်: သင် 2000 ပြည့်နှစ်ရေခဲပြင် Cube ကိုရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့လျှင်သင်ဖြစ်နိုင်ပထမဦးဆုံးအနေနဲ့သရုပ်ဆောင်အဖြစ်သူ့ကိုငါသိ၏။ Cube ကိုအမြဲတမ်းစတူဒီယိုနှင့်ရုပ်ရှင် set ကိုအပေါ်တယောက်အတွက်တဦးတည်းခြေလျင်ရှိခဲ့ပါတယ်။ သူ Boyz ဎအဆိုပါ hood ကို (1991), Barbershop (2002) အပါအဝင်အဓိကရုပ်ရှင်၏အရေအတွက်ကြယ်ပွင့်မယ့်, ကျနော်တို့သို့သျောလညျးရှိပါတယျရှိပါသလား (2005) နှင့် 21 ဤနေရာသို့သွားရန်လမ်း (2011) ။
DJ သမား Yella (ထိုအခါ)
အယ်လ် Pereira / မိုက်ကယ် Ochs မော်ကွန်း / Getty Images
ထိုအခါ: Yella ကမ္ဘာ့အတန်းအစား Wreckin '' Cru နေ့ရက်ကာလ၌ Dr. Dre အတူတက်ရောက်လေ၏။ သူ NWA နှင့် Dre နှင့်အတူ shared ထုတ်လုပ်မှုလုပ်ငန်းတာဝန်များနှင့်ပူးပေါင်းခဲ့သည်။ သူလည်းအများအပြားမမှန်သောအဆိုတော်များများအတွက်မှတ်တမ်းများကိုထုတ်လုပ်ခဲ့ပါတယ်။ Yella မကြာမီတွင်ပြီးနောက် 1996 ခုနှစ်တွင်တစ်ကိုယ်တော် သွား. သူဂီတကနေအနားယူခဲ့သည်။
DJ သမား Yella (ယခု)
ရှေး Diddy နှင့်အတူ DJ သမား Yella ။ (BET များအတွက်ချမ်းသာ Polk / BET / Getty Images)
အခုဆိုရင်: Yella အရွယ်ရောက်ပြီးသူရုပ်ရှင် directing တစ်ဦးစစ်မှုထမ်းရှိခဲ့ပါတယ်။ သူ unretired ကတည်းကဖွင့်အသစ်တစ်ခုအယ်လ်ဘမ်တွင်လုပ်ကိုင်နေသည်။
MC Ren (ထိုအခါ)
(အယ်လ် Pereira / မိုက်ကယ် Ochs မော်ကွန်း / Getty Images)
ထိုအခါ: MC Ren (က Black အတွက်ဗီလိန်ခေါ်ရက်စက်မှုဗီလိန်ခေါ်) 1987 ကနေအုပ်စုရဲ့ပြိုကျသည်အထိ NWA အဖွဲ့ဝင်တစ်ဦးဖြစ်ခဲ့သည် 1991 ခုနှစ်တွင် Cube နှင့်အာရေဗျမင်းသား left ပြီးနောက် Ren အရှိန်မြှင့်ခြင်းနှင့်အုပ်စုပိုကြီးတဲ့အရေးအသားအခန်းကဏ္ဍမှပါဝင်ခဲ့သည်။ သူကပိုထက်ဝက်ကျော်သီချင်းများအပေါ်ထင်ရှားကျော်ကြားသော, Eazy-Duz-ဒါဟာအပေါ်အဓိက featured ။ NWA ရဲ့ရှုပ်ထွေးအဖွဲ့ဟာပြီးနောက် Ren Eazy-E ကိုအတူ flyer နှင့်မှန်သောမှတ်တမ်းအပေါ်အများအပြားရစေရန်အောင်မြင်သောတစ်ကိုယ်တော်အယ်လ်ဘမ်ဖြန့်ချိ။
MC Ren (ယခု)
(ဂါဗြေလ Olsen / Getty Images)
အခုဆိုရင်: Post ကို-NWA, Ren ရုပ်ရှင်ထုတ်လုပ်မှုမှာထိုးနှက်မှုတစ်ခုယူခဲ့ပါတယ်။ 2004 ခုနှစ်တွင်သူသည်ဂိမ်းထဲမှာပျောက်ဆုံးနေတဲ့လွတ်လပ်တဲ့, ဖြောင့်-to-DVD ကိုရုပ်ရှင်, ထုတ်ပြန်ခဲ့သည်။ သူနေဆဲအခြိနျမှနျမှ cameos ပြန်လည်ရုပ်သိမ်းသွားခဲ့သည်ပေမယ့် Ren ကတည်းက, ဂီတကနေအငြိမ်းစားယူခဲ့ပါသည်။
ထိုအခါ: အာရေဗျအိမ်ရှေ့မင်းသားသူတစ်ဦးနောက်ခံအခန်းကဏ္ဍနှင့်အစောပိုင်းအုပ်စု left ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒါဟာဖြစ်နိုင်မယ့် NWA များ၏အပြောင်-လူသိများအဖွဲ့ဝင်တစ်ဦးဖြစ်ပါတယ်။ မင်းသားတစ်ဦးနိုင်စွမ်းထုတ်လုပ်သူနဲ့ DJ, စတင်ချိန် မှစ. ရှိ၏။ သူကမကြာမီအုပ်စုရဲ့ Full-အရှည်ပွဲဦးထွက်, လမျးဖွောငျ့ Outta Compton (1988) အပြီးထွက်လာခဲ့တယ်။ 1988 ခုနှစ်တွင်နည်းပညာ၏ဖီးနစ် Institute မှရေခဲပြင် Cube ရဲ့ပြန်လာပြီးနောက်မင်းသားသူနည်းနည်းကစားသမားလျှော့ချသွားမည်ဖြစ်ကြောင်းသိသည်။ သူဟာ 1989 ခုနှစ်ရဲ့ညီအစျကိုအာရပ်နှင့်အတူစတင်တစ်ဦးတစ်ကိုယ်တော်အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းလိုက်စားသွားလေ၏။
အခုတော့သူ့ထွက်ခွာသွားပြီးနောက်အာရေဗျမင်းသားသည်သူ၏အိုင်ယာလန်သမ္မတဟောင်း Mary Robinson တောင်းဆိုဖို့နှစ်ပေါင်းတရားရုံးများတွင် NWA စစ်တိုက်ကြ၏။ ယနေ့သူသူ Electro-ရက်ပ်အတွက်အဓိကဖွင့်ခြင်းနှင့်မှန်မှန် Los Angeles မြို့မှာရှိတဲ့ဒေသခံကလပ်မှာ deejays အဆိုပါစပြီးပါမောက္ခ X တို့မှာအောက်တွင်လုပ်ဆောင်တယ်။
ထိုအခါ: Compton မှာမွေးဖွားကြီးပြင်း, Eazy-E ကိုသူမမှန်သောမှတ်တမ်းစတင်ရန် dope ရောင်းချရာမှကယ်တင်ခြင်းသို့ရောက်ရ၏ပိုက်ဆံကိုအသုံးပြုခဲ့သည်။ အဆုံး၌, Eazy ရေခဲပြင် Cube နှင့် Dr. Dre နှင့်အတူအမဲသားရှိခဲ့ပါတယ်။ အခြားတည်ထောင်သူအဖွဲ့ဝင်အုပ်စုရဲ့ရန်ပုံငွေ misappropriating ၏ Eazy စွပ်စွဲတယ်။ မိမိအတစ်ကိုယ်တော်အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းလည်းညစ်မဟုတ်ခဲ့ - သူ့ရဲ့ပထမဆုံးတစ်ကိုယ်တော် outing 1988 ခုနှစ်, ရဲ့ Eazy-Duz-ဒါဟာနှစ်ဆပလက်တီနမ်သွားလေ၏။
NWA ပြီးနောက်: Eazy သူရွယ်တူချင်းအားဖြင့်များစွာသောရက်ပ်သီချင်းများအတွက် memorialized ခဲ့ရဲ့ 1995 ခုနှစ် AIDS-related ပြဿနာများမှသွဇာလှမျးမိုးရှေ့တော်၌ခဏတာတစ်ကိုယ်တော်အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းရှိခဲ့ပါတယ်။
ဧပြီလ7Compton, California မှာ Eazy-E ကိုနေ့ဖြစ်ပါတယ်။
တစ်ဦးက $ AP ကျောက်တွေနဲ့အင်တာဗျူး
Kendrick Lamar vs Drake: အမဲသား Timeline ကို
ဆန်တက္ကသိုလ်မှ Pimp C ရဲ့အမွေအနှစ်မော်ကွန်းတင်ပြီး
တကယ်တော့လူတွေကသေဆုံးဖူးသူကားအဘယ်သူ 10 Rapper
အတ္ထုပ္ပတ္တိ: Dr. Dre
အတ္ထုပ္ပတ္တိ: Snoop Dogg
တစ်ဦးကရေကူးကန် Cue ရွေးချယ်ခြင်း
တေလာတက္ကသိုလ် GPA, SAT နှင့် ACT ဒေတာများ
ဂရိတ် horn မြည်အချက်အလက်
ကက်ပီတောလ် Peak အကြောင်းအချက်အလက်
အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု Los 10 apellidos hispanos စရဖ comunes en Estados UNIDO (y ကိုအဘယ်သူမျှမလက်တင်အမေရိကန်တွေ)
အဆိုပါ YEAR တွင်ရာထူးအမည်နှင့်အတူ Excel ကိုအတွက်နေ့စွဲများနုတ်
တစ်ဦးဝိညာဏ Element ကိုအဖြစ်ရေ
က Tiger Woods '' ပိုင်ဆိုင်မှုကဘာလဲ?
Hogan ရဲ့ Alley: ဒါဟာ Is အဘယျကဘယျကွောငျ့ဒါကခေါ်၏အဘယ်မှာရှိ
Formal ပြင်သစ် Negation - ဗိုလ်ချုပ်ကြီးနေဝင်း ... ပွို
တစ်ဦး Onomatopoeic Way ကိုဘဝတုပပါဒါက 59 စပိန်စကား
ညာဘက်ကစားသမားများအတွက်ဘိုးလင်းနှမြော Up ကို Pick လုပ်နည်း
တစ်ပန်းချီပိုမိုအတိုငျးကွညျ့လိုကျ Make3နည်းလမ်းများ
ဂြာမနျတွင် "Stehen" (ရပ်) ကို Conjugate လုပ်နည်း
Beethoven ရဲ့လရောင် Sonata